Xiisad culus oo ka dhex taagan Baarlamaanka Hirshabeelle & Gudoomiyaha oo mari kara Wadadii Jawaari – XAMAR POST
Ciidankii tababarka loogu qaaday dalka Eritea 17 Askari ka mid ah oo medykooda Muqdisho laga soo dajiyay saakay!
Guddoomiye kuxigeenka gobolka Ibrahim Dheere oo lagu eedeeyey baaqashada kulankii Waaberi iyo Dharkinley
Gabar Kenyaati ah oo La-taliye u ah Madaxweyne Farmaajo,
dab xoogan oo qabsaday Xarun Tareenada laga raaco oo ku taalla Magaalada Jiddah ee dalka sacuudiga.
Cabdikariin Guuleed balan Ayaa meel inoo yaalo Aniga iyo Fahad,
Qaraxaan ayaa waxaa uu uu goordhow ka dhacay agagaarka Isgoyska SOS ee Magalada Muqdisho,
DEG DEG: Madaxweynihii hore Sheekh Shariif oo ku xaniban garoonka Muqdisho,
Beesha Maxamuud hiraab (duduble) oo wada kacdoon ka dhan ah Senator dhagey geele,
Shan Suaalood oo aan Musharax Odowaa weeydiiyey?
War Deg deg ah Qarax xoogan oo Muqdisho ka dhacay.
Ciidankii tababarka loogu qaaday dalka Eritea 17 Askari ka mid ah oo medykooda…
Guddoomiye kuxigeenka gobolka Ibrahim Dheere oo lagu eedeeyey baaqashada kulankii…
dab xoogan oo qabsaday Xarun Tareenada laga raaco oo ku taalla Magaalada Jiddah ee…
Xil. Mahad Salaad oo 7 qodob kusoo koobay Halista ka dhalankarta Heshiiska DFS &…
Xiisad culus oo ka dhex taagan Baarlamaanka Hirshabeelle & Gudoomiyaha oo mari kara Wadadii Jawaari
By Mohamed Ahmed On Apr 15, 2018
Waxaa soo if baxaya khilaaf u dhaxeeya mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle, kuwaas oo ku kala qeybsamay kulamada baarlamaankaas oo qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa sheegay in uusan qab soomin kulamada baarlamaanka muddo ku dhow dhowr bilood.
Kuwaas oo qabsoomi la`aantaas ku eedeeyay guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cusmaan Barre.
Waxaa kaloo ay sheegeen in inta badan xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle aysan aheen kuwoo ku sugan magaalada Jowhar oo ah xarunta maamulka Jirshabeelle, taasina ay qaab ka qaadatay qabsoomi la`aanta kulamada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle.
Xildhibaan Nuur Xaashi Warsame oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in muddo bilooyin ah aysan wax kulan ah yeelanin baarlamaanka Hirshabeelle iska markaana ku eedeeyay qabsoomi la`aanta kulamada baarlamaanka guddoomiye Sheekh Cusmaan Barre.
Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle Sheekh Cusmaan Bare oo aan wax ka weydiinay eedeeyntaas loo soo jeediyay ayaa iska fogeeyay eedeeynta loo soo jeediyay, wuxuuna sheegay in ay dhacaan kulamada baarlamaanka, oo uu shir guddoomiyo ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Hirshabeelle.
XOG: Farmaajo, Faarax C/qaadir, Fahad Yaasiin & Shariif oo kala wata Shaqsiyaadka u tartamaya bedelka Jawaari
Doorashada kursigii ugu dambeeyay Golaha shacabka oo maanta ka dhaceysa Dhuusamareeb
Mohamed Ahmed Sep 29, 2019
Qaraxaan ayaa waxaa uu uu goordhow ka dhacay agagaarka Isgoyska SOS ee…
DEG DEG: Madaxweynihii hore Sheekh Shariif oo ku xaniban garoonka…
Beesha Maxamuud hiraab (duduble) oo wada kacdoon ka dhan ah Senator…
Dowladda Federaalka oo ku guuleysatay in la joojiyo dhismaha saldhigii…
SAWIRO:-RW Kheyre oo la kulmay Dhalinyarada Magalada Baydhabo
Ra’iisul Wasaare Kheyre oo ku wajahan Magalada Marka
Odayaal baaq kasoo saaray Colaada Gobolka Galgaduud
Dagaaal culus oo ka dhacay duleedka Magalada Marka
Sirdoonka soomaaliya oo bilaabay adeegsiga tachnology-da Casiga ee caalamka
Maxkamadda Ciidanka oo xukun ku ridday rag loo heysto qarax sanadkii hore ka dhacay…
Soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay Koonfur Afrika
Weerar Madaafiiic ah oo lagu qaaday Saldhig ay ku sugan…
Qarax Qasaare geystay oo ka dhacay Gobolka Baay
Prev Next 1 of 1,364
© 2020 - XAMAR POST. All Rights Reserved.